RIKOOR: Christian Benteke Oo Jabiyay Rikoorka Goolkii Ugu Dhakhsiyaha Badnaa Koobka Adduunka Xalayto. - Wargane News
Home Sports RIKOOR: Christian Benteke Oo Jabiyay Rikoorka Goolkii Ugu Dhakhsiyaha Badnaa Koobka Adduunka...
Geesiga seddexleyda dhaliyay Christian Benteke ayaa sidoo kale jabiyay rikoorka goolka ugu dhakhsiyaha badan abid isreebreebka Koobka Adduunka isagoo TODOBO ilbiriqsi gool ku dhaliyay kulankii ay Belgium ay 6-0 kaga badisay Gibraltar.
Rikoorka Benteke ayaa waxa uu la wareegayaa kan isreebreebka iyo weliba ciyaaraha kama danbeysta ee Koobka Adduunka.
Weeraryahanka Crystal Palace ayaa dhexda ka helay baas islamarkii ciyaarta la bilaabay, waxaana uu kubada dabamariyay goolhayaha Gibraltar Deren Ibrahim.
Benteke ayaa goolashiisa kale kala dhaliyay daqiiqadihii 43aad iyo 56aad, iyadoo Axel Witsel, Dries Martens iyo xiddiga Chelsea Eden Hazard ay goolasha kale ku dareen.
Rikoorka uu Benteke dhigay xalayto waxaa hore u hayay xiddigii San Marino David Gualtieri kaasoo kaliya sideed ilbiriqsi gool kaga dhaliyay England kulan isreebreebka Koobka Adduunka ahaa oo dhacay 1993.
Goolka uu rikoorka ku dhigay Benteke waxa uu sidoo kale ahaa goolkii ugu horeysay ee uu u dhaliyo Belgium tan iyo bishii March 2015, waana 562 maalmood ka hor.